Ingabe Ukumaketha Kanjani Ukusimama Komkhiqizo Nokwehluka Kwakho? | Martech Zone
Usuku Lomhlaba bekuleli sonto futhi sibone ukuqhutshwa okujwayelekile kokuthunyelwe komphakathi lapho izinkampani zithuthukisa imvelo. Ngeshwa, ezinkampanini eziningi - lokhu kwenzeka kanye ngonyaka kanye nangezinye izinsuku babuyela ebhizinisini njengenjwayelo.
Ngesonto eledlule, ngiqede umhlangano wokumaketha enkampanini enkulu embonini yezokunakekelwa kwempilo. Elinye lamaphuzu engiwenzile ngaphakathi komhlangano ukuthi inkampani yabo ibidinga ukumaketha kangcono umthelela owenziwa yinkampani yabo emvelweni, ekusimameni, ekubandakanyeni, nasekuhlukaneni.
Eminyakeni eyedlule, izinkampani zazivame ukuqhubekisa ingxenye yenzuzo yazo kwezinye izinhlangano ezinkulu zosizo, zakhipha umbiko ngabezindaba ngomnikelo wazo, zazikubiza ngosuku. Lokho akusinqumi. Bobabili abathengi namabhizinisi ngokufanayo bafuna ukwenza ibhizinisi nezinkampani ezihlinzeka ngezimpahla nezinsizakalo abazifunayo… kodwa futhi basebenzela umphakathi. Akukhona nje kuphela ukuthi amakhasimende afuna lokhu, kanjalo nalabo esizoba ngabasebenzi bethu.
Ngenkathi beyikhasimende, ngihlatshwe umxhwele ngokuphelele ukuthi kanjani UDell Technologies uzibophezele ekwakheni umthelela wabo emphakathini ekuthengisweni kwabo kanye namasiko ezinkampani. Bayisibonelo esihle okufanele basilandele. Futhi, baqhubekile nokushayela izinto ezintsha, bayancintisana kunanini ngaphambili, futhi abayenzi inzuzo yokwenza lokho. Bayabona ukuthi akuyona nje i- into efanele ukwenza, futhi kuyisu elihle lebhizinisi.
Nasi isibonelo esisodwa esihle… UDell uvuselela amapulasitiki olwandle emaphaketheni abo. Ukusimama kwabo nomsebenzi wabo wezemvelo awugcini lapho, noma kunjalo. Ngaphandle kokuphinda kusetshenziswe kabusha, babuye basebenze ekubhaleni i-eco-labeling, ekwehliseni amandla, nasekunciphiseni izinyathelo zekhabhoni. Babeke ukusimama kunoma yisiphi isixhumanisi kulayini wabo wokunikezela.
UDell ubuye uvule futhi athembeke ngokungabi nokwehluka nokubandakanywa embonini yezobuchwepheshe. Lokhu ngokomlando kuholele ekutheni abancane nabesifazane bangabi nalo ithuba abanye abanalo kulo mkhakha. UDell uzibophezele ngezinsizakusebenza, utshala imali ezinhlelweni zemfundo yezingane zisencane emhlabeni wonke, ukuze kube sobala ngokuphelele ekubikeni kwabo. Baphinde bakubeka phambili nendawo enkabeni yokuqashwa kwabo:
Ukungafihli lutho bekuyisihluthulelo futhi. UDell unayo ukubika njalo ekuqhubekeni kwayo, ibeka umsebenzi wayo phambili naphakathi nendawo ukuze abathengi, amabhizinisi, kanye nabatshalizimali bazi ngentuthuko yabo. Abalokothi bathi banakho fixed lezi zinkinga, kepha ngokusobala bayaqhubeka nokubika futhi bakhombise inqubekela phambili yabo. Lokhu ukumaketha okuhle.
Ngingakukhuthaza futhi ukuthi ubhalise futhi ulalele ifayela le- I-Dell Luminaries podcast engihlanganyela nayo UMark Schaefer. Sinesihlalo somugqa wokuqala, sixoxa nabaholi, ophathina, namakhasimende kaDell enza lo mehluko.
UDell Luminaries Podcast
Ngakho-ke, liyini isu lakho lobumbano futhi umkhiqizo wakho ubhekwa kanjani ngokombono wenhlalakahle yomphakathi? Ngabe zikhona izinto ongazenza ukushintsha izinqubo zakho zangaphakathi ukwenza ngcono ukusimama nokubandakanya wonke umuntu? Futhi, okubaluleke kakhulu, ungaxhumana kanjani naleyo mizamo ngempumelelo amathemba akho kanye namakhasimende?
Futhi ungakhohlwa ... ukunikela ngemali akwanele. Abathengi namabhizinisi balindele ukubona okuhle emphakathini ingene esikweni lakho nakuzo zonke izinqubo. Ikhasimende lakho elilandelayo noma isisebenzi sifuna ukwazi ukuthi uzinikele ekwenzeni umhlaba ube yindawo engcono, hhayi nje ukushiyela omunye umuntu ukuthi akwenze.
Tags: ukuhlukahlukakwezemveloipulasitiki olwandleukuqashelwaukusimama